Vaovao - Fetiben'ny lanternaly faly!
Ny zoma 26 febroary 2021 no fetibe fanala ho an'ny sinoa rehetra. Fetibe mahafaly izany. Manintona indrindra ny alina.
Amin'ity andro ity dia ahanton'ny olona ny fanilo ary apetrany eo ambaniny ny ankamantatra. Avy eo tonga ny lalao: maminaza ny ankamantatra!
Izay maminavina ny ankamantatra ankamantatra dia hahazo loka. Toy ny lalao PK feno fahalianana sy fihomehezana ary fahasambarana izany.
Ary misy andiana hetsika nentim-paharazana toy ny fijerena lanterne, fihinanana dumplings ary famonoana afomanga.
Ny hariva dia hazava ny jiro. Manao alina mahafinaritra!
Eto izahay dia maniry ny hanana Fetibe Fanilo tsara indrindra ny tsirairay!
Fampahalalana: Hetsika sy tantaran'ny fetibe Lantern:
Ny Fetiben'ny Fanilo dia mihinana amin'ny andro faha-15 amin'ny volana voalohany. "Yuanxiao" dia nampiasaina ho sakafo efa ela teto amin'ny firenentsika. Tao amin'ny Dynasty Song, sakafo malaza iray ho an'ny Fetibe Fanilo no nanjary nalaza teo amin'ireo olona. Ity karazan-tsakafo ity dia nantsoina voalohany hoe "Floating Yuanzi" ary taty aoriana dia "Yuanxiao", ary niantso azy koa ny mpandraharaha hoe "Yuanbao". Ny fetibe lanternana dia mampiasa siramamy, raozy, sesame, paty tsaramaso, kanelina, voanio, voanjo, paty jujube, sns. Ny famenoana dia noforonina ary nakodia ho lafarinina lava. Ny bolam-bary glutinous dia vita amin'ny hoditra vita amin'ny lafarinina lava. Natao tamin'ny famenoana azy io, ary tsy mitovy mihitsy ny fomba. Ny Fetibe Fanilo dia mety ho hena na legioma, samy hafa ny tsirony. Azo ampangotrahina amin'ny lasopy, endasina, ary haohana.
Hevero ny ankamantatra:
Ny ankamantatra ankamantatra dia antsoina koa hoe ankamantatra. Hetsika nentim-paharazana amin'ny Fetibe Fanilo. Ny ankamantatra ankamantatra dia novolavolaina tamin'ny ankamantatra ary niainga tamin'ny vanim-potoana lohataona sy fararano ary fanjakana miady. Mihantona eo amin'ny jiro ilay ankamantatra mba hahafahan'ny olona maminavina sy mitifitra. Nanomboka tamin'ny tarana-mpanjaka atsimo. Hira atsimo Zhou Mi's "Zavatra taloha momba ny haiady?" "Deng Pin" firaketana: "Mampiasà lanterne vita amin'ny landy mba hanapahana tononkalo, fanesoana, ary lokon-doko, lingo an-doha miafina, ary fitenin'i Beijing taloha, hanihany ireo mpandeha an-tongotra." Fetibe fanala, ny tanàna amperora tsy alina, Fetiben'ny Lantern amin'ny lohataona, olona Miscellaneous, tononkalo, ankamantatra, boky no ao anaty jiro, hita taratra amin'ny labozia, voatanisa ao amin'ny làlambe, ahafahan'ny olona maminavina, ka izany dia antsoina hoe "ankamantatra ankolaka"
Mouse amin'ny totozy:
Ity hetsika ity dia natao indrindra ho an'ny olona kolontsaina. Satria matetika ny totozy dia mihinana sombin-kazo goavambe amin'ny alina, dia ren'ny olona fa raha mamahana totozy amam-bary izy ireo amin'ny andro fahadimy ambin'ny folon'ny volana voalohany dia afaka mandingana ny kankana izy ireo. Noho izany dia nahandro vilany lehibe buburina mahia ireo olona ireo tamin'ny andro fahadimy ambin'ny folo tamin'ny volana volana voalohany, ary ny sasany amin'izy ireo dia nandrakotra azy tamin'ny nofon-kena. Eo am-pamakiana teny iray dia fanozonana ny totozy hihinana ilay zazakely manahirana mba ho sarotra maty.